Somaliland: Siyaasi Cali-Gurray Oo Sheegay In Madaxweynaha Ka Danbeeya SIILAANYO Ay U Taallo Shaqo-Adag Oo U Baahan Go’aammo Ad-adag. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasi Cali-Gurray Oo Sheegay In Madaxweynaha Ka Danbeeya SIILAANYO Ay U...
Siyaasi Cali Yuusuf oo ka mid ah Xisbigga Taladda haya ee KULMIYE,ayaa sheegay inay Somaliland u baahantahay hogaamiye go’aamo adag,kaas oo ka saara xaaladdan ay haatan ku sugan-tahay.
Muj.Cali-guray,ayaa sidaas ku sheegay qoraal kooban oo ku baahiyay bartiisa xidhiidhka Bulshadda ee FACEBOOK-ga,waxaana uu u dhignaa sida tan; “Runtii aragtida musharaxa Kulmiye hadii ficil loo rogo waa mid lagu guuri karo oo hadii laga rumeeyo ay hubaal tahay in lagu beegsan karo nolol tan dhaanta. Balse marka hore waxay ku xidhan tahay sida ay uga go’an tahay shakhsiga isagu hogaamiyaha ahi inu isbedel sameeyo. Laakiin ma samayn karo hadii aanu go’aan qaadasho lahayn waayo waxa badan carqaladaha horyaala iyo xoogaga ka dhanka ah isbedelka ee aan ka dhex arki karayn danahooda gaarka ah oo aad xarfaan ugu ah tabaha ay adeegsadaan iyo halka ay u nugulyihiin dadkeenu sida qabyaaladda oo kale.
Anigu hawlaha u yaal Madaxwaynaha ka dambeeya kan xilka haya maaha kuwa si fudud uu uga dabaalan karo haddii aanu noqon marka hore qof go’aamo adadag qaadan kara isla markaana dadkiisa ku qancin kara kuna midayn kara inay la guntadaan hadii uu tusiyo daacadnimo dadaal si cadaalad ahna u maamulo oo wax ugu qaybiyo isaga oo u danaynaya inta tirada badan ee saboolka ah. Waa in aanu noqon hadii uu yahay nin isbedel samayn kara nin kooxeed ama nin qabiil.
Waa laga yaabaa in aan qaldanahay waayo bini aadmi ayaan ahay lakiin eexi waa iga walaahi Musharaxa Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaan u arkaa ka ugu dhaw inta tartamaysa ee ku dhiiran kara inu wax bedeli karo waayo waa nin aan ku qanacsanahay inu xili adag go’aan adag qaadan karo wana sababta aan shakhsi ahaan u taageersanahay. Lakiin qofka isaguna cid kale u arka waa ra’yigiisa waanan ku ixtiraamayaa”,ayuu yidhi Cali-guray.
Somaliland: Cali Gurey Oo Karbaashay Xisbiyada Mucaaridka Ah Ee Somaliland Ucid Iyo Waddani Balse Muxu Ka Yidhi